ABUU CUBEYDA BINU AL-JARRAAX
Inuu Abuu Cubeyda dilo aabihiis ayaanan ahayn wax sidaas loola yaabo, maxaa yeelay waxay awoodda rumeyntiisa Eebbe (sw) gaartay, iyo taageerada uu ku bixinayo diintiisa iyo weliba amaanadiisa ee ummadda Nebi Muxammad meel ay u hanqal-taagto nafaf fara badan marka laga eego Eebbe (sw) agtiisa. Waxaa sheekeeyay Muxammad Binu Jacfar, wuxuuna yiri: “waxaa Rasuulka (scw) u soo wafdiyay wafdi koox kirishtaan ah, waxay ku yiraahdeen: Yaa Abal-qaasim (mid ka mid ah kunyada Nebiga s.c.w ee aan habboonayn inuu qof kale ku kunyoodo ama la baxo) waxaad noo soo dirtaa nin ka mid ah asxaabtaada oo aad raalli nooga tahay, si uu noo kala garsooro dhexdeena arrimo la xiriira hanti aan isku qabanay awgeed, haddaad tihiin jamaacada muslimiintana waxaad tihiin kuwo aan xaggeena laga raalli yahay”. Rasuulka (scw) wuxuu ku yiri “ii imaada galabta, waxaan idinku darayaa nin qawi ah ahna amiin”. Cumar Binu Khadiib ayaa markuu maqlay hadalkaas wuxuu yiri: waxaan waqti horey sii aaday salaaddii duhurka, mana jeclaanin madaxtinimo maalintaas aan ka ahayn jaceylka aan u qabay inaan noqdo ninka leh tilmaantaas iyo sifadaas uu sheegay Nebiga (scw). Markii uu na tujiyay Rasuulka (scw) salaaddii duhurka, wuxuu billaabay inuu eeg-eego xagga midigtiisa iyo bidixdiisa, annigana waxaan billaabay inaan kor ahaan u qooraansado, bal si uu ii arko Rasuulka (scw), sidii ayuu u eeg-eegayay Rasuulka (scw) asxaabta dhexdooda jeer uu markii danbe ka arkay Abuu Cubeyda Binu Al-Jarraax, kadibna wuu u yeeray, wuxuuna ku yiri: “waxaad raacdaa iyaga oo si xaq ah u kala xukmi dhexdooda waxay isku khilaafeen”. Waxaan naftayda ku iri “waxaa la tagay sifadii aan rabay Abuu Cubeyda”.
"waxaan idiin dardaarmayaa dardaaran, oo haddii aad qaadataan aydan ka suulaynin abadkiin kheyr. Waxaad oogtaan salaadda, soomana bisha Ramadaan, saddaqadana la baxa (zakada), gutana acmaasha xajka iyo cumrada, u nasteexeeya madaxdiina, oo ha khiyaamina, yeynana idin mashquulin adduunyo, qofku haddii kun sanno oo cumri ah la siiyo, waxaa hubaal ah inuu aakhirka ku sugnaan doono halka aan hadda ku suganahay, wassalaamu caleykum waraxmatullaahi" . Abu-Cubeyda oo saarnaa sariirta sakaraadka
Daabacaad: Jun 4, 2002